Nabil Fekir oo si wayn lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqo mid ka mid ah muruq weynayaasha horyaalka La Liga – Gool FM
(La Liga) 24 Dis 2018. Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in magca laacibka kooxda Lyon ee Nabil Fekir lala xiriirinayo Real Madrid suuqa xagaaga ee soo aadan.
Kooxaha qaarada Yurub ayaa waxay haatan bilaabeen inay qaadaan talaabooyin ay ku xoojinayaan safafkooda, Real Madrid ayaana lala xiriirinayaa saxiixyada in kabadan hal ciyaaryahan.
Wargeyska “Marca” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Nabil Fekir oo haatan da’adiisu tahay 25 jr uu dalab ka helayo maamulka kooxda Real Madrid, si uu ugu dhaqaaqo garoonka Santiago Bernabéu.
Ma ahan markii ugu horeesay ee lala xiriiriyo saxiixa Nabil Fekir kooxda Real Madrid, waxaana sidaan oo kale lala xiriirnayay suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay, gaar ahaan Barcelona ayaa sidoo kale lala xiriirinayay saxiixa laacibka reer France.
Heshiiska Nabil Fekir uu ku joogo kooxda Lyon ayaa wuxuu dhacayaa sanada 2020, xili lagu soo waramayo in ciyaaryahankan uu iska diiday in uu qandaraaska u kordhiyo kooxdiisa Lyon, sidaas darteed waxaa lala xiriirinayaa in waqti kasta ee soo aadan uu ka bixi karo kooxda reer France.
Si kastaba Real Madrid ayaa si adag kaga fiirsan doonta inay sameyso saxiixa Nabil Fekir suuqa kala iibsiga ee xiliga qaboobaha, waxayna ugu horeyn qiimeyn doontaa heerka baahida ay Los Blancos u qabto inay sameyso saxiixa laacibkan reer France.